Fitsidihana tany Londres : Vokatra azo tsapain-tanana -
AccueilRaharaham-pirenenaFitsidihana tany Londres : Vokatra azo tsapain-tanana
Tapitra omaly ny dian’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tao Grande Bretagne, alohan’ny hiazoany ny tanindrazana kosa dia nisy ny fotoana izay nitafan’ny Filoha tamin’ ireo mpanao gazety mikasika ity dia ara-diplaomatika ity. Nandritra izany valan-dresaka izany no nahafahan’ny Filoham-pirenena nanatanteraka tatitra izay nilazany fa ‘’nahafa-po’’ ny dia tany an-toerana.
‘”nahafa-po ahy tanteraka ny dia izay notanterahina taty Londres, na dia teo aza ny fahafenoan’ny fandaharam-potoana. Ny fihaonana maro isan-karazany, izay notanterahina dia nahafahana nijery ireo mpiara-miasa eo amin’ny sehatry ny fampandrosoana’’ hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina teo anoloan’ireo mpanao gazety. Ireo fihaonana maro notanterahina ihany koa dia nahafahan’ireo tompon’andraikitra maro nihaona sy nahafantatra ny fomba fanao eo amin’ny tetikasa izay ho tanterahina toa ny minisitra sy ireo parlematera 5 izay delegasionina niaraka tamin’ ny Filoham-pirenena.
Tatitry ny dia
Anisan’ny votoatin’ny dian’ny Filoham-pirenena tany Angletera ny fanokafana indray ny masoivoho malagasy. Nandritra izany dia natomboka tamin’ny fotoam-pivavahana ny fotoana izay sady nitodrana ambavaka ireo mpiasa any an-toerana amin’ny asa fampandrosoana ny firenena, izay sady fiarahabana ny Malagasy izay monina sy mipetraka any an-toerana. Nandritra ity dia ity ihany koa no nisian’ny fihaonana amin’ ireo tompona orinasa Malagasy tany an-toerana ihany. Anisan’ny goavana ihany koa ny fitsidihana sy ny fifampiresahana izay natao tamin’ny orinasa goavana misehatra amin’ny lafiny ara-tsolika toa ny ‘’ British petrolium’’. Satria tokoa dia sarobidy amin’ny firenena iray ny lafin’ny tontolo iainana, dia nahazo tombony isika Malagasy satria afaka maka tahaka ihany koa ny modely Britanika eo amin’ izay fiarovana ny tontolo iainana izay. ‘’Taorian’ny fitsidihana ny Royal botanique i Kew, dia nanatanteraka fihaonana an-databatra boribory izay niaraka tamin’ ireo mpikaroka momba ny tontolo iainana , sy ireo tompon’andraikitra maro eo anivon’ireo fikambanana tsy mitady tombontsoa ara-bola, na ONG misehatra amin izay lafiny ara-tontolo iainana izay’’ hoy hatrany ny fanamafisana noentin’ny Filoham-pirenena. Manoloana ny tanjaky ny sehatra ara-pizahatany misy eto Madagasikara sy ny fananantsika ireo harena maro dia tapa-kevitra ny hampiasa vola eto izy ireo.
Anisan’ny nahazo tombony tamin’ ity dia ity ihany koa ireo mpandraharaha, satria nandritra ny fihaonana maro dia nahafahan’izy ireo nanamafy ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta indray izay . Sehatra roa ara toe-karena no tena laharam-pahamehana dia teo ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany sy ny sehatry ny angovo. Ity dia ity ihany koa izay sehatra iray noentina hatrany nanamafisana ny fiaraha-miasan’ ny firenena roa tonta indrindra eo amin’ny lafiny ara toe-karena. Nanipika noho izany ny filoha “ny fahasamihafana ny maha frankofonina antsika sy ny maha anglisy azy ireo, dia ahafahana tsara miara-miasa eo amin’ny sehatra ekonomika , satria tsy mila mandalo rafitra manaraka ny arofenitra intsony toa ny vondrona eropeanina’’. Nanatrika ny fanokanana ny London Stock Exchange ihany koa ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ity diany tany Londres ity, io izay tsena fanakalozam-bola.
Ary farany nandritra ity dian’ny Filoha tany Angletera ity dia nisy ny fihaonany tamin’ny praiminis itra teo aloha Tony Blair , izay nahafahana nahazo tolo-kevitra eo amin’ny sehatry ny fampandrosoana.
Mirona mankany amin’ny fanatsarana hatrany ny fitondrana sy ny fitantanana. Izay no ataon’ny Fitondram-panjakana, amin’izao fotoana izao. Araka izany, omaly niroso tamin’ny fanovana ara-teknika ny mpikambana teo anivon’ny governemanta ny Fitondram-panjakana. Marihina fa tsy “remaniement” ...Tohiny